थारूको छोरो हुँ भ्रष्टचारीलाई सडकमै पुर्‍याउँछु बरु पार्टीले कारबाही गरे, आफ्नै बारी खनेर खान्छु (भिडियाे) - Purbeli News
थारूको छोरो हुँ भ्रष्टचारीलाई सडकमै पुर्‍याउँछु बरु पार्टीले कारबाही गरे, आफ्नै बारी खनेर खान्छु (भिडियाे)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २३, २०७६ समय: ८:३८:३०
इटहरी उपमहानगरपालिका अहिले विवादै विवादको घेरामा छ। विवादको मुख्य केन्द्र बनेका छन् यो उपमहानगरपालिका मेयर द्‍वारिकलाल चौधरी। उनीह केही समयदेखि कर्मचारी र पत्रकारलाई लक्षित गरी जथाभावी बोलिरहेका छन्। एकजना जनप्रतिनिधिले आफ्नो र पदीय मर्यादालाई समेत भुल्दै बोलेपछि उनको आलोचना भइरहेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान छेडेको भनिएका चौधरीकै पक्षमा पनि आवाज उठिरहेको छ। पछिल्लो समय विवादित बनेका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिमध्ये अग्रस्थानमा द्वारिकलालको नाम आइरहेको छ। पछिल्लो समय पत्रकारलाई लोपार्नेदेखि नाकको डाँडी भाँच्न एक करोड विनियोजन गरेको धम्की दिएपछि चौधरी विवादको भूमरिमा परेका छन्।
‘पत्रकारको नाकको हड्डी भाँच्न’ एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि मेयर चौधरीमाथि नेकपाकै शीर्ष नेताहरु पनि खनिएका छन्। नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराई र शंकर पोखरेलले मेयर चौधरीले आत्मालोचना गर्नु पर्ने बताएका छन्। उनीहरुले मेयर चौधरी हक्की स्वभावका भएपनि अभिव्यक्तिको तरिका गलत भएकाले आत्मालोचना गर्नु पर्ने बताएका छन्।
नेकपाकै शीर्ष नेताहरुले आत्मालोचना गर्न सुझाएका छन् त्यसो नगरे तपाईँमाथि कारबाही होला नि? भन्ने प्रश्नमा मेयर चौधरीले ठाडो उत्तर दिँदै भने,‘कारबाही गरुन्, म थारुको छोरो हुँ। आफ्नै बारी खनेर खान्छु। पार्टीले मलाई के खान दिएको छ र?’
मेयर चौधरीले आत्मालोचना शब्द कम्युनिष्टहरुको थेगोजस्तै भएको टिप्पणी गरे। ‘मलाई आत्मालोचना गर भन्ने नेताहरु आफैले माफी मागुन् कि, मेरो कार्यकर्ताले तिमीलाई गाली गर्‍यो मलाई माफ गर भनेर’ उनले भने,‘मैले माफी माग्न के गल्ती गरेको छु र?’
उनले केही पत्रकारहरूले कमिसनखोरी र भ्रष्ट नेताहरूको इशारामा चलेर आफूलाई बदनाम गर्ने गरी लेखिरहेको आरोप लगाए। ‘पत्रकारहरुले पनि पित पत्रकारिता गरेका छन्। मैले चाटुकारिता भनेर कमेन्ट गरेर मैले के बिराए?,’उनले भने।
तपाईंले पत्रकारलाई आक्रमण गरिरहनुभएको छ नि?
पत्रकारहरू पनि स्वार्थी नेताहरूको इशारामा बैठक गरेर, मलाई बदनाम गर्ने गरी कलम चलाउँदै आएका छन्। पीत पत्रकारिता गरेका छन्। त्यस्तो पत्रकारिता गर्नेलाई मैले चाटुकारिता, पीत पत्रकारिता भनेर कमेन्ट गरेँ। अनि त्यसपछि मलाई फोन गरेर गाली गरियो। मैले भनेँ, मैले बुझिसकेको छु, कसको इशारामा, कसको हन्डी खाएर चाटुकारिता र पत्रकारिता गर्दैछौ। एकजना रहेछ, रामप्रसाद चौलागाईं। खानेपानीमा १८ वर्षदेखि छन्। के स्वार्थ छ, खानेपानीमा? अमेरिकाको राष्ट्रपति दुई कार्यकाल ८ वर्षभन्दा बढी राष्ट्रपति हुँदैन। त्यत्रो पावर इन्जोय गर्छ, खानेपानीमा के छ? पाइप विछ्याउँदा कमिसन, ट्यांकी बनाउँदा र जग्गा खरिद गर्दा पनि कमिसन खान्छन्। त्यही पैसा खुवाएर पत्रकारलाई अर्कोपटक मेयर बन्‍ने सपना देख्दैछन्। मलाई अनेकौं लञ्‍छना लगाउने?
तपाईंकै पार्टीका सहयोद्धा, सहयात्रीहरूले तपाईंलाई विवाद ल्याउने गरेका हुन् कि कसो?
रामप्रसादले ऐलानी जग्गा हडपेर महल बनाएको छ। २० वर्षअघि खोले खान पाउँदैनथे। कुलो पैनी मिचेर पर्खाल लगाएका छन्। पार्टीभित्र गुटबन्दी छ। पार्टीको हालत थाहा छँदैछ नि! नेपाली पार्टीहरू कस्ता छन् थाहै छ। ती रामप्रसाद नेकपा सुनसरी जिल्ला कमिटी सदस्य पनि हुन्।
पार्टीकै गुटबन्दीले पत्रकार प्रयोग गरेर विवादमा ल्याएका हुन्?
हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि मलाई क्लीन चिट दियो, मेयर सा’व तपाईं इमान्दार हुनुहुँदो रहेछ भनेर। तीनपटक बयान दिन जानुपर्‍यो। बदमासी गर्छन् कर्मचारी, घुस खान्छन्, कर्मचारी। बदनामी हुन्छ, इटहरी उपमहानगरपालिकाका हामी जनप्रतिनिधिको।
पत्रकारको नाकको डाँडी भाँच्‍न एक करोड विनियोजन गरेको छु भन्दा इटहरी नगरपालिकाको इज्जत बढ्यो त?
इटहरीमा त मैले भनेको मात्रै हुँ, हजुर। विरानगरमा त भाँचिसकेका छन्। मैले भनेको मात्रै छु तर भाँचेको त छैन नि। स्वदेश नेपालबाट ( भिडियाे : थाहाखबर
द्‍वारिकलाल चौधरी भ्रष्टचारी